Soomaaliya: Xoog ku Rarida Dadka Barakacayaasha ah | Human Rights Watch
April 19, 2015 11:50PM EDT
(Nairobi) – Ciidammada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa horraantii bishii Maarso ee 2015-ka, si xoog ah ku raray ku dhawaad 21,000 oo qof oo ahaa barakacayaal caasimadda ku nool. Sidaasi waxaa warbixin ay manta soo saartay ku sheegtay Human Rights Watch. Ciidammada dawladda ayaa taariikhdu markii ay ahayd 4-ta iyo 5-ta Maarso, karbaashay qaar ka mid ah barakacayaasha la raray, waxaana ay ka burburiyeen hoygoodii, iyagoo cunno iyo biyo la’aan dhigay. Inta badan dadkaasi la raray ayaa guryahoodii uga soo barakacay abaartii iyo dagaalladii dhacay 2011-kii, waxaana marar badan ay ahaayeen kuwo lasii barakiciyo.
Sida ku cad sharciga caalamiga ah ee xuquuqda dadka iyo weliba axdiga Midowga Afrika u yaalla ee heshiiska Kampala ee ilaalinta iyo caawinta barakacayaasha gudaha, dawladda waxaa saran mas’uuliyad ah inay si aan kala sooc lahayn u xushmeyso xuquuqda dadka barakacayaasha ah. Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiska Kampala -- oo ah midkii u horeeyay ee heer gobol ah, kaasoo looga hortagayo barakicinta, lagu caawinayo barakacayaasha, looguna helayo xal waara -- balse weli Midowga Afrika uma aanay gudbin qaabka fulinta heshiiskaasi. Sida ku cad heshiiska Vienna ee sharciga heshiisyada, Soomaaliya waxay mas’uuliyad ka saaran tahay “in aanay jebin ujeeddada heshiis ka hor inta aanay dhaqan gelin.”